धादिंग घ´टनाः ‘मलाई नाम्लोले बाँ´ध्यो, मैले हेर्दाहेर्दै तेल ततायो र मेरो टा´उकोदेखि तात्तिएको तेल ख´न्यायो’, पिडित पुजा (भिडियो) – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/धादिंग घ´टनाः ‘मलाई नाम्लोले बाँ´ध्यो, मैले हेर्दाहेर्दै तेल ततायो र मेरो टा´उकोदेखि तात्तिएको तेल ख´न्यायो’, पिडित पुजा (भिडियो)
धादिंग / श्रीमान र श्रीमतीबीच झ गडा भएन भने त्यो सम्बन्ध के सम्बन्ध ? तर झ गडा गर्नुको अर्थ यो पक्कै होईन कि श्रीमतीलाई हात खुट्टा बाँ धेर ता तो ते ल उसको शरिरमा ख न्याईदिने । यो कस्तो सम्बन्ध ? कति निर्दयी हो त्यो मन ? के यो एउटा सामान्य मानिसले गर्न सक्ने काम हो ? के हिजोआज हाम्रो समाजमा मानवता क्रु’र बन्दै गएको हो त ? हो भने हाम्रो समाजबाट निस्किएर कुन देश, कुन शहर र कुन गाउँमा गएको छ मानवता ?
मन्दिरभित्र ला´ शको रुपमा फेला परेकी सम्झनामाथि यतिसम्म भएको रहेछ, सबै प्रमाण भेटियो